ရပျနားမညျ့လကွေောငျးလိုငျး ခရီးစဉျမြား ရပျနားမညျ့အခြိနျကာလ - Logistics Guide
????? ??????? လကွေောငျးလိုငျးသညျ
Yangon-Doha-Yangon ခရီးစဉျမြားကို၂၀၂၀ မတျလတှငျ ၂၄-၂၆-၂၇-၂၉-၃၀-၃၁ ရကျ နမြေ့ား ဧပွီ ၁ရကျနမှေ့ ၃၁ ရကျနအေ့ထိ မေ ၁ရကျနမှေ့ ၃၁ ရကျနအေ့ထိ ရပျနားထားထား မညျဖွဈကွောငျးအသိပေးအကွောငျးကွားအပျပါသညျ။
??????? ???????? လကွေောငျးလိုငျးသညျ Myanmar- Vietnam ပြံသနျးပွေးဆှဲလကျြရှိသော ခရီးစဉျမြားကို ၂၀၂၀ မတျလ ၂၂ရကျနမှေ့စ၍ ဧပွီလ ၃၀ ရကျနအေ့ထိ ရပျနားထားထားမညျဖွဈကွောငျး အသိပေးအကွောငျးကွားအပျပါသညျ။
???? ??????? လကွေောငျးလိုငျးသညျ Yangon-Bangkok-Yangon ခရီးစဉျမြားဖွဈသညျ့ TG2301 နှငျ့ TG2302 (WE301/302) ခရီးစဉျမြားကို ၂၀၂၀ မတျလ ၂၉ရကျနမှေ့စ၍ အောကျတိုဘာလ ၃၁ ရကျ နအေ့ထိရပျနားထားထားမညျဖွဈကွောငျး အသိပေးအကွောငျးကွားအပျပါသညျ။
??????? ???????? ???????? သညျ Yangon-Bangkok-Yangon ခရီးစဉျမြားဖွဈသညျ့ UB-019 နှငျ့ UB-020 Morning Flight မြားကို ၂၀၂၀မတျလ (၂၂) ရကျနမှေ့ မတျလ (၃၁) ရကျနအေ့ထိ ရပျနားထားမညျဖွဈကွောငျး အသိပေးအကွောငျးကွားအပျပါသညျ။
????????? ???????? လကွေောငျးလိုငျးသညျ Yangon-Singapore-Yangon ခရီးစဉျမြားဖွဈသညျ့ SQ997 နှငျ့ SQ998 ခရီးစဉျမြားကိုမတျလ (၂၃)ရကျနမှေ့ ဧပွီလ (၃၀) ရကျနအေ့ထိ တဈပတျလြှငျ(၃)ကွိမျ ဖွငျ့ တနင်ျလာ၊ဗုဒ်ဓဟူး နှငျ့ သောကွာ နမြေ့ားတှငျပြံသနျးပွေးဆှဲသှားမညျဖွဈကွောငျး အသိပေးအကွောငျးကွားအပျပါသညျ။
?????? ??? လကွေောငျးလိုငျးသညျ ICN-RGN-ICN ခရီးစဉျမြားဖွဈသညျ့ KE471 နှငျ့ KE472 Flight မြားကို ၂၀၂၀မတျလ (၉) ရကျနမှေ့ ဧပွီလ (၂၅) ရကျနအေ့ထိ ရပျနားထားခွငျးကို ၂၀၂၀ ဧပွီလ (၃၀)ရကျနအေ့ထိ ထပျတိုးရပျနားသှားမညျဖွဈကွောငျး အသိပေးအကွောငျးကွားအပျပါသညျ။
Myanmar National Airlines သညျ Yangon-Bangkok-Yangon ခရီးစဉျမြားဖွဈသညျ့ UB-019 နှငျ့ UB-020 Morning Flight မြားကို မတျလ (၂၂) ရကျနမှေ့ မတျလ (၃၁) ရကျနအေ့ထိ ရပျနားထားမညျဖွဈကွောငျး အသိပေးအကွောငျးကွားအပျပါသညျ။
????? ??????? လေကြောင်းလိုင်းသည်
Yangon-Doha-Yangon ခရီးစဉ်များကို၂၀၂၀ မတ်လတွင် ၂၄-၂၆-၂၇-၂၉-၃၀-၃၁ ရက် နေ့များ ဧပြီ ၁ရက်နေ့မှ ၃၁ ရက်နေ့အထိ မေ ၁ရက်နေ့မှ ၃၁ ရက်နေ့အထိ ရပ်နားထားထား မည်ဖြစ်ကြောင်းအသိပေးအကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။
??????? ???????? လေကြောင်းလိုင်းသည် Myanmar- Vietnam ပျံသန်းပြေးဆွဲလျက်ရှိသော ခရီးစဉ်များကို ၂၀၂၀ မတ်လ ၂၂ရက်နေ့မှစ၍ ဧပြီလ ၃၀ ရက်နေ့အထိ ရပ်နားထားထားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။
???? ??????? လေကြောင်းလိုင်းသည် Yangon-Bangkok-Yangon ခရီးစဉ်များဖြစ်သည့် TG2301 နှင့် TG2302 (WE301/302) ခရီးစဉ်များကို ၂၀၂၀ မတ်လ ၂၉ရက်နေ့မှစ၍ အောက်တိုဘာလ ၃၁ ရက် နေ့အထိရပ်နားထားထားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။
??????? ???????? ???????? သည် Yangon-Bangkok-Yangon ခရီးစဉ်များဖြစ်သည့် UB-019 နှင့် UB-020 Morning Flight များကို ၂၀၂၀မတ်လ (၂၂) ရက်နေ့မှ မတ်လ (၃၁) ရက်နေ့အထိ ရပ်နားထားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။
????????? ???????? လေကြောင်းလိုင်းသည် Yangon-Singapore-Yangon ခရီးစဉ်များဖြစ်သည့် SQ997 နှင့် SQ998 ခရီးစဉ်များကိုမတ်လ (၂၃)ရက်နေ့မှ ဧပြီလ (၃၀) ရက်နေ့အထိ တစ်ပတ်လျှင်(၃)ကြိမ် ဖြင့် တနင်္လာ၊ဗုဒ္ဓဟူး နှင့် သောကြာ နေ့များတွင်ပျံသန်းပြေးဆွဲသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။
?????? ??? လေကြောင်းလိုင်းသည် ICN-RGN-ICN ခရီးစဉ်များဖြစ်သည့် KE471 နှင့် KE472 Flight များကို ၂၀၂၀မတ်လ (၉) ရက်နေ့မှ ဧပြီလ (၂၅) ရက်နေ့အထိ ရပ်နားထားခြင်းကို ၂၀၂၀ ဧပြီလ (၃၀)ရက်နေ့အထိ ထပ်တိုးရပ်နားသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။
Myanmar National Airlines သည် Yangon-Bangkok-Yangon ခရီးစဉ်များဖြစ်သည့် UB-019 နှင့် UB-020 Morning Flight များကို မတ်လ (၂၂) ရက်နေ့မှ မတ်လ (၃၁) ရက်နေ့အထိ ရပ်နားထားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။
Source: Columbus Travels Myanmar FB Page
ဗိုငျးရပျဈအခကျက လကွေောငျးလိုငျးအတှကျအမွတျကွီးစားဖို့ အခကျြလလေား ……
အမရေိကနျဒျေါလာ ရှဈမီလီယံအထိ အရှုံးပျေါ ခဲ့တဲ့ ဗီယကျနမျလကွေောငျးလိုငျး
ကမ္ဘာ့ခရီးအတိုဆုံး စီးပွားဖြစ်လေကြောင်းခရီးစဉ် တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သော QR8173